झुम्काले गर्दा कानमा ठुलो प्वाल परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी सजिलै हटाउनुहोस् कानको ठुलो प्वाल – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/झुम्काले गर्दा कानमा ठुलो प्वाल परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी सजिलै हटाउनुहोस् कानको ठुलो प्वाल
काठमाडौँ । सामान्यतया युवतीहरु झुम्का लगाउन मन पराउँछन्। साधारण र उत्तम देखीनुको साथ, युवतीहरले उनीहरूको पोशाकलाई अझ राम्रो रूप दिन ठूलो झुम्का लगाउन मन पराउँछन्।
कानको ठूला झुम्का तपाईंको लुकमा थप गर्दछ। तर कानमा ठूला झुम्का लगाउँदा कानका प्वालहरू ठूला हुन्छन् र कानहरू झर्काउँछन्।हामी धेरै कोसीस गर्छौ कि हाम्रो कानको ठुलो प्वाल सानो बनोस् तर कुन तरिका अबलम्बन गर्दा ठिक हुन्छ यो बुझ्न सकिँदैन । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
त्यसैले आउनुहोस् जानौँ कोलगेट टुथपेस्टको सहायताले कानको प्वाललाई कसरी पहिलाको जस्तै राख्न सक्छौ त ?
टुथपेस्टको साथ प्वाल बन्द गर्नुहोस्
के तपाइँलाई थाहा छ कि टुथपेस्ट प्रयोग गरेर, तपाइँको कानको प्वाल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईं सजिलैसँग कोलगेट वा कुनै अन्य सेतो टूथपेस्ट प्रयोग गरी प्वालहरू बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी प्रयोग गर्ने त ?//
केही समयपछि सामान्य मोइश्चराइजर वा लोशनको प्रयोग पनि गर्नसक्नुहुन्छ ।किनकी टूथपेस्टले तपाईको स्किनलाई सुख्खा गराइदिन्छ तर ध्यान दिनुहोस् कि जब तपाई यो उपाय अपनाइरहनुहुन्छ त्यतिबेला झुम्का नलगाउनुहोस् यो विधि तब अपनाउनुहोस् जब तपाईको इच्छा हुन्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **